Honorary of Doctor of Humanities which is the honorary award of St Clements University of IQY St Clements Education Group which was begun to issue for Myanmar in every two years and which is the award to recognize and honour those who render their extra ordinary task at ultimate sacrifices for the people regardless of religion, politics, nationality ,power, authority and personal ground.
Lesser awards such as Masters and Bachelors can also be issued.
Proposal by IQY Technical College Academic
Ex Captain Nay Myo Zin (Hon Doctor of Humanities)(2017)
www.highlightcomputer.com/Nay Myo Zin Thank Giving.mp4
U Kyaw Thu (Free Funeral Society) (Hon Doctor of Humanities)(2019)
U Kyaw Thu Doctor of Humanities Degree
http://www.highlightcomputer.com/U Kyaw Thu Dr of Humanities Degree.pdf
Graduation Video that contains U Kyaw Thu’s award
U Htike Zaw (Elected MP of NLD Kyaukme Electorate ,Shan State) (Hon Doctor of Humanities)(2021)
U Htike Zaw’s Biography
www.highlightcomputer.com/U Htike Zaw Biography.pdf
U Htike Zaw’s Doctor of Humanities Degree
www.highlightcomputer.com/Htike Zaw - Certificate.pdf
U Htike Zaw’s Doctor of Humanities Transcript
www.highlightcomputer.com/Htike Zaw - Transcript.pdf
U Htike Zaw Award Announcement
www.highlightcomputer.com/U Htike Zaw Award Announcement.pdf
www.highlightcomputer.com/16 Jan 2021.pdf
Major General Nerdah Bo Mya (KNDO) (Hon Doctor of Humanities)(2021)
http://www.highlightcomputer.com/Karen Major General Nerdah Bo Mya.pdf
http://www.highlightcomputer.com/Nerdah Bo Mya Hon Doctor of Humanities Transcript.pdf
http://www.highlightcomputer.com/iqyadministration/Major General Nerdah BoMya Letter of Invitation.pdf
www.highlightcomputer.com/FB Responses 27 Sept 2021.pdf
Brigadier General Sumlut Gun Maw (KIA) (Hon Doctor of Humanities)(2021)
www.highlightcomputer.com/Sumlut Gun Maw KIA.pdf
http://www.highlightcomputer.com/Sumlut Gun Maw (New Transcript).pdf
http://www.highlightcomputer.com/iqyadministration/Brigadier General Sumlut Gun Maw KIA Letter of Invitation.pdf
http://www.highlightcomputer.com/iqyadministration/Gen Gun Maw 24 Sept 2021.pdf
Honorary Doctor of Military Science Degree
General Gam Shawng Gunhtang
To- General Gam Shawng Gunhtang
Chief of Staff of Kachin Independence Army (KIA)
KIA Head Quarter
General Gam Shawng Gunhtang,
The Doctor of the University is one of onlyafew honorary doctorate degrees St Clements University issues andamaximum of three can be issued per calendar year.
Doctor of the University in Military Science based on the career experience asamilitary leadership in which the candidate has developed the military knowledge and proved high level administrative, leadership, management skills and leading the military training institutions.
We are impressed on the record of your fighting for freedom of both Kachin and all people of Myanmar especially in
· Your leadership in expanding three brigades number 6, 7, 8 and many battalions as well as leadership in self sufficient in arms and training People Defence Forces for both Kachin and Myanmar who come to KIA controlled areas.
· you have resisted the pressure by military junta forces to handover the PDF Members to avoid the offensive by military junta forces by showing your responsibility asamilitary leader.
St Clements University and People Defence Force Academy (PDFA) of The Institution of Professional Engineers Myanmar, Military Engineering Branch jointly nominate General Gam Shawng Gunhtang for Honorary Doctor of University in Military Science.
We understand that you have done your enthusiastic freedom and humanitarian works for the people of both Kachin and Myanmar without expecting any award for yourself. But our St Clements Education Group, St Clements University & St Clements University Myanmar College would like to offer to award our Doctor of the University in Military Science on you to show our solidity with the people of Kachin and Myanmar.
We understand that at the moment, the revolution tasks and security is more important than attending the physical graduation ceremony by you but we expect that in the near future, we will also get the chance to confer your award personally at the physical graduation ceremony of St Clements University and St Clements University Myanmar College.
We will be happy to know about your acceptance of our Doctor of the University in Military Science degree.
Dr David Le Cornu
St Clements Education Group
People Defence Force Academy
General Baw Kyaw Heh
Date 8 October 2021
To- General Baw Kyaw Heh
Deputy Chief of Staff of Karen National Liberation Army (KNLA)
KNLA Head Quarters
Dear General Baw Kyaw Heh
We are impressed on the record of your fighting for freedom of both Karen and all people of Myanmar especially in
· Your leadership in strengthening Karen National Liberation Army to becomeaformidable fighting and defence force after fall of KNU Head Quarter Marnelplaw and strongly resit military junta forces which use airpower in the offensives and provides the leadership in training the KNLA Soldiers and People Defence Force members in KNU controlled areas.
· Furthermore you have resisted the pressure by military junta forces to handover the PDF Members to avoid the offensive by military junta forces by showing your responsibility asamilitary leader.
St Clements University and People Defence Force Academy (PDFA) of The Institution of Professional Engineers Myanmar, Military Engineering Branch jointly nominate General Baw Kyaw Heh for Honorary Doctor of University in Military Science.
We understand that you have done your enthusiastic freedom and humanitarian works for the people of both Karen and Myanmar without expecting any award for yourself. But our St Clements Education Group, St Clements University & St Clements University Myanmar College would like to offer to award our Doctor of the University in Military Science on you to show our solidity with the people of Karen and Myanmar.
Dr David Le Cornu Dr Kyaw Naing
St Clements Education Group The Institution of Professional Engineers
St Clements University Myanmar (IPEM)
People Defence Force Academy (PDFA)
Khu Oo Reh (ကရင်နီအမျိုးသားတိုးတက်ရေး ပါတီဥက္ကဋ္ဌ) သည်St Clements University ၏လူသား ချင်းစာနာမှု ဆိုင်ရာဂုဏ်ထူးဆောင်ပါရဂူဘွဲ့ရရှိ
ကရင်နီအမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ(KNPP)နှင့်ကရင်နီတပ်မတော် (ကေအေ) သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင်ကယားနှင့်မြန်မာလူမျိုးများ၏လွတ်လပ်ခွင့်ကိုတိုက်ပွဲဝင်နေသောအဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်။
KNPP/KA ၏ထင်ရှားသောခေါင်းဆောင်၏ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု ဆိုင်ရာများကိုအသိအမှတ်ပြုရန်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများကိုစိတ်ပါလက်ပါဆောင်ရွက်ခဲ့ကာကယားနှင့်မြန်မာစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူများကိုအကာအကွယ်ပေးရန်နှင့် ကရင်နီအမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ(KNPP)နှင့်ကရင်နီတပ်မတော်  နှင့်၎င်းတို့၏ခေါင်းဆောင်များ၏လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်ချက်များအတွက်တက္ကသိုလ်ပညာရေးကောင်စီကအကြံပြုသည့်   Khu Oo Reh (ကရင်နီအမျိုးသားတိုးတက်ရေး
ပါတီဥက္ကဋ္ဌ)သည် St Clements University ၏လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ ဂုဏ်ထူးဆောင် ပါရဂူ ဘွဲ့ကိုရရှိသည်။
ဤဘွဲ့သည် KNPPနှင့် KA တို့၏ကာလကြာရှည်ကာဆောင်ရွက်နေသောလွတ်လပ်ခွင့်နှ င့်လူသား ချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ လုပ်ရပ်များအတွက်လည်းဂုဏ်ထူးဆောင် အမှတ် သင်္ကေတဖြစ်သည်။
Pu Zing Cung  (ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦးဥက္ကဋ္ဌ) သည် St Clements University Myanmar College နှင့် IPEM Technological University ၏လူသား ချင်းစာနာမှု ဆိုင်ရာ ဂုဏ်ထူးဆောင် ပါရဂူဘွဲ့ရရှိ
ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး (Chin National Front-CNF)နှင့်ချင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် (Chin People Defence Force-CDF) သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင်ချင်းနှင့်မြန်မာလူမျိုးများ၏ လွတ်လပ်ခွင့်ကို တိုက်ပွဲဝင်နေသောအဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်။
CNF/CDF ၏ထင်ရှားသောခေါင်းဆောင်၏ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု ဆိုင်ရာများကိုအသိအမှတ်ပြုရန်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများကိုစိတ်ပါလက်ပါဆောင်ရွက်ခဲ့ကာချင်းနှင့်မြန်မာစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူများကိုအကာအကွယ်ပေးရန်နှင့် ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး (Chin National Front CNF)နှင့်ချင်းပြည်သူ့ကာကွယ် ရေးတပ် (Chin People Defence Force-CDF) နှင့်၎င်းတို့၏ခေါင်းဆောင်များ၏ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်ချက်များအတွက်တက္ကသိုလ်ပညာရေးကောင်စီကအကြံပြုသည့်   Pu Zing Cung  ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး (Chin National Front CNF )သည် လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာဂုဏ်ထူးဆောင်ပါရဂူဘွဲ့ကိုရရှိသည်။
ဤဘွဲ့သည် CNFနှင့် CDF တို့၏ကာလကြာရှည်ကာဆောင်ရွက်နေသာလွတ်လပ်ခွင့်နှ င့်လူသား ချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ လုပ်ရပ်များအတွက်လည်းဂုဏ်ထူးဆောင် အမှတ် သင်္ကေတဖြစ်သည်။
Honorary Master of Military Science Degree
ဦးသက်နိုင်အောင် (ဦးသက်ကြီး) (Zero People Defence Force)
Zero ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေး တပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကို ဂုဏ်ထူးဆောင် စစ်ပညာမဟာသိပ္ပံဘွဲ့ကိုချီးမြှင့်
သြစတြေးလျနိုင်ငံမှ စီမံခန့်ခွဲသော မြန်မာနိုင်ငံ ကျွမ်းကျင်အင်ဂျင်နီယာများ အဖွဲ့အစည်းသည် မြန်မာနိုင်ငံနွေဦး တော်လှန်ရေးတွင် ပါဝင်သည့် တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ IPEM နည်းပညာတက္ကသိုလ်၏ ဌာနခွဲဖြစ်သော ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအကယ်ဒမီသည် တော်လှန်ရေးကာလတွင် မြန်မာပြည်သူပြည်သားများအား ပညာသင်ကြားနိုင်ရန် တော်လှန်ရေးပညာရေးစနစ်ဖြစ်ပါသည်။
ကျဆုံးသွားတဲ့ သူရဲကောင်း ၂၂ ဦးရဲ့ ဈာပနကို ပြုလုပ်ပေးပြီးမြင်းခြံမှာ Zero ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေး တပ်ဖွဲ့ကို ဦးဆောင်၍စစ်အာဏာရှင်တွေကို တွန်းလှန်တိုက်ခိုက်နေသူရဲဘော် ဦးသက်နိုင်အောင် (ဦးသက်ကြီး) AGTI (Mechanical)ကိုမြန်မာနိုင်ငံ ကျွမ်းကျင်အင်ဂျင်နီယာများ အဖွဲ့အစည်း
ပညာရေးဌာနက ဂုဏ်ထူးဆောင် စစ်ပညာမဟာသိပ္ပံဘွဲ့နဲ့ ဆုငွေတွေကိုချီးမြှင့် ကာ မြင်းခြံ Zero ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေး တပ်ဖွဲ့ကိုအလေးပြု လိုက်ပါသည်။
ဦးသက်နိုင်အောင် (ဦးသက်ကြီး) (Zero People Defence Force) မှ ဆုငွေလက်ခံရယူရန်
iqytechnicalcollege@gmail.com နှင့် mamyatmon@yahoo.com.au သို့
အီးမေးလ်ပေးပို့၍ ဆက်သွယ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ဆက်သွယ်နေသော PDF များနှင့်ပတ်သက်၍ အများအားဖြင့် ထုတ်ပြန်ခြင်းမျိုး မပြုလုပ်သော်လည်း Social Media နှင့် Myanmar Now ပေါ်ရှိ ဦးသက်နိုင်အောင် ၏အချက်အလက်များအရ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ပြည်သူများအတွက် တိုက်ပွဲဝင်နေသော Zero Local People Defence Force ကို အသိအမှတ် ပြုရန်နှင့် မြှင့်တင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့မှ ချီးမြှင့်သော ဂုဏ်ထူးဆောင်ဘွဲ့ကို လူသိရှင်ကြား ထုတ်ပြန်ကြေငြာပါသည်။
1/ ပုလဲပြည်သူ့ကာကွယ်ရေး တပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်နဂါး (Bo Nagar or Commander Nagar)
2/မုံရွာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေး တပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်သံမဏိ (Bo Thanmani or Commander)
ပုလဲနှင့်မုံရွာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေး တပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တို့ကိုကို ဂုဏ်ထူးဆောင် စစ်ပညာမဟာသိပ္ပံဘွဲ့ကိုချီးမြှင့်
2/မုံရွာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေး တပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်သံမဏိ (Bo Thanmani or Commander Thanmani )တို့ကိုမြန်မာနိုင်ငံ ကျွမ်းကျင်အင်ဂျင်နီယာများ အဖွဲ့အစည်းပညာရေးဌာနက ဂုဏ်ထူးဆောင်စစ်ပညာမဟာသိပ္ပံဘွဲ့နဲ့ ဆုငွေတွေကိုချီးမြှင့် ကာ ပုလဲနှင့်မုံရွာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေး တပ်ဖွဲ့တို့ကိုအလေးပြု လိုက်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ဆက်သွယ်နေသော PDF များနှင့်ပတ်သက်၍ အများအားဖြင့် ထုတ်ပြန်ခြင်းမျိုး မပြုလုပ်သော်လည်း Social Media နှင့် Myanmar Now ပေါ်ရှိ ဗိုလ်နဂါးနှင့်ဗိုလ်သံမဏိတို့ ၏အချက်အလက်များအရ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ပြည်သူများအတွက် တိုက်ပွဲဝင်နေသော ပုလဲနှင့်မုံရွာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တို့ကိုအသိအမှတ် ပြုရန်နှင့် မြှင့်တင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့မှ ချီးမြှင့်သော ဂုဏ်ထူးဆောင်ဘွဲ့ကို လူသိရှင်ကြား ထုတ်ပြန်ကြေငြာပါသည်။
ပြည်သူဘက်မှရပ်တည်ကာကွယ်သော CDM တပ်မတော်သားဗိုလ်ကြီးဇင်ယော် (ပြည်သူ့စစ်သားအဖွဲ့)ကို ဂုဏ်ထူးဆောင် စစ်ပညာမဟာသိပ္ပံဘွဲ့ကိုချီးမြှင့်
အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုဆန့်ကျင်စွန့်ခွါပြီး ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေး တပ်ဖွဲ့နှင့်ပူးပေါင်း တိုက်ခိုက်ကာ ပြည်သူတို့ကိုကာကွယ်ပေးနေသည့်အပြင်စစ်ပညာများကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေး တပ်ဖွဲ့နှင့် ပြည်သူတို့ကိုဖြန့်ဝေပေးနေသည့် CDM တပ်မတော်သားဗိုလ်ကြီးဇင်ယော် (ပြည်သူ့စစ်သားအဖွဲ့)ကို မြန်မာနိုင်ငံ ကျွမ်းကျင်အင်ဂျင်နီယာများ အဖွဲ့အစည်းပညာရေးဌာနက ဂုဏ်ထူးဆောင် စစ်ပညာ မဟာသိပ္ပံဘွဲ့ကိုချီးမြှင့် ကာ ပြည်သူဘက်မှရပ်တည်ကာကွယ်သော CDM တပ်မတော်သား တို့ကိုအလေးပြု လိုက်ပါသည်။
နောက် CDM တပ်မတော်သားဗိုလ်ကြီးဇင်ယော်သည်အလားတူဂုဏ်ပြုခံရသောဒုတိယမြောက်
ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ဆက်သွယ်နေသော PDF/CDM များနှင့်ပတ်သက်၍ အများအားဖြင့် ထုတ်ပြန်ခြင်းမျိုး မပြုလုပ်သော်လည်း Social Media ပေါ်ရှိ ဗိုလ်ကြီးဇင်ယော် ၏အချက်အလက်များအရ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ပြည်သူများအတွက် တိုက်ပွဲဝင်နေသော CDM တပ်မတော်သား တို့ကိုအသိအမှတ် ပြုရန်နှင့် မြှင့်တင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့မှ ချီးမြှင့်သော ဂုဏ်ထူးဆောင်ဘွဲ့ကို လူသိရှင်ကြား ထုတ်ပြန်ကြေငြာပါသည်။
ပြည်သူဘက်မှရပ်တည်ကာကွယ်သော ပထမဆုံးCDM တပ်မတော်သားဗိုလ်ကြီးညီသုတ (ပြည်သူ့စစ်သားအဖွဲ့)ကို ဂုဏ်ထူးဆောင် လူမှုရေးမဟာဘွဲ့ကိုချီးမြှင့်
ကျွန်ုပ်တို့၏ IPEM နည်းပညာတက္ကသိုလ်၏ ဌာနခွဲဖြစ်သော ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအကယ်ဒမီသည် တော်လှန်ရေးကာလတွင် မြန်မာပြည်သူပြည်သားများအား ပညာသင်ကြားနိုင်ရန် တော်လှန်ရေး ပညာရေးစနစ်ဖြစ်ပါသည်။
အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုဆန့်ကျင်စွန့်ခွါပြီး ပြည်သူဘက်မှရပ်တည်ကာကွယ်သော ပထမဆုံးCDM တပ်မတော်သားဗိုလ်ကြီးညီသုတ (ပြည်သူ့စစ်သားအဖွဲ့)ကို တပ်မတော်သားများ CDMဝင်ရန်လူမှုရေးကူညီမှုများကိုအခြေခံ၍မြန်မာနိုင်ငံ ကျွမ်းကျင်အင်ဂျင်နီယာများ အဖွဲ့အစည်းပညာရေးဌာနက ဂုဏ်ထူးဆောင် လူမှုရေးမဟာဘွဲ့ကိုချီးမြှင့် ကာ ပြည်သူဘက်မှရပ်တည်ကာကွယ်သော CDM တပ်မတော်သား တို့ကိုအလေးပြု လိုက်ပါသည်။
ကျဆုံးသွားသော Karenni Generation Z ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေး တပ်ဖွဲ့ဝင်နှင့် Free Burma Ranger တပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ကို ဂုဏ်ထူးဆောင် စစ်ပညာမဟာသိပ္ပံဘွဲ့ ၊ ဂုဏ်ထူးဆောင်လူသားချင်းစာနာမှု မဟာဘွဲ့ တို့ကိုချီးမြှင့်
ကျွန်ုပ်တို့၏ IPEM နည်းပညာတက္ကသိုလ်၏ ဌာနခွဲဖြစ်သော ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအကယ်ဒမီသည် တော်လှန်ရေးကာလတွင် မြန်မာပြည်သူပြည်သားများအား ပညာသင်ကြားနိုင်ရန် စီစဥ်ထားသည့် တော်လှန်ရေးပညာရေးစနစ်ဖြစ်ပါသည်။
ခဲ့သူKarenni Generation Z ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေး တပ်ဖွဲ့ဝင်ရဲဘော် ဇော်လင်းထွန်း ကိုဂုဏ်ထူး ဆောင်စစ်ပညာမဟာသိပ္ပံဘွဲ့ ကိုချီးမြှင့် ကာ Karenni Generation Z ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေး တပ်ဖွဲ့
2/ကရင်နီပြည်သူတို့ကိုအသက်ပေးကာကယ်ဆယ်ခဲ့သူ Free Burma Ranger တပ်ဖွဲ့ဝင် ရဲဘော် အယ်လစ်ဇဘက်ကို ဂုဏ်ထူးဆောင်လူသားချင်းစာနာမှု မဟာဘွဲ့ တို့ကိုချီးမြှင့် ကာ Karenni Free Burma Ranger တပ်ဖွဲ့ကိုအလေးပြု လိုက်ပါသည်။
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်သူ့ကာကွယ်ရေး တပ်ဖွဲ့များနှင့် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် တပ်များအတွက်ရံပုံငွေရှာဖွေပေးကာ GZ များကိုမိခင်ကဲ့သို့စောင့်ရှောက်နေသူဒေါ်အိုင်ရင်း
(Singapore) ကို ဂုဏ်ထူးဆောင် ဂုဏ်ထူးဆောင်လူသားချင်းစာနာမှု မဟာဘွဲ့ ကိုချီးမြှင့်
1/ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်သူ့ကာကွယ်ရေး တပ်ဖွဲ့များနှင့် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် တပ်များအတွက်ရံပုံငွေရှာဖွေပေးကာ GZ များကိုမိခင်ကဲ့သို့စောင့်ရှောက်နေသူဒေါ်အိုင်ရင်း
(Ahlei Irene Nggar ) (Singapore) ကို ဂုဏ်ထူးဆောင်လူသားချင်းစာနာမှု မဟာဘွဲ့ ကိုချီးမြှင့်
ကာ တော်လှန်ရေးပုံငွေရှာဖွေပေးနေသူများကိုအလေးပြု လိုက်ပါသည်။
St Clements University မှ ချီးမြှင့်သော လူသားချင်းစာနာမှုဂုဏ်ထူးဆောင် ပါရဂူဘွဲ့များ စာရင်း
1/Ex Captain Nay Myo Zin (2017)
2/U Kyaw Thu (Free Funeral Society)(2019)
3/Late U Htike Zaw (NLD MP Kyaukme) (2020 for 2021)
ရခိုင်တပ်မတော်စစ်ဦးစီးချုပ်ကို စစ်ပညာသိပ္ပံဆိုင်ရာဂုဏ်ထူးဆောင်ပါရဂူဘွဲ့နှင့်ပခုက္ကူမြို့ပြ ပျောက်ကြားတပ်မှူးကို ဂုဏ်ထူးဆောင် စစ်ပညာမဟာသိပ္ပံဘွဲ့ ဂုဏ်ထူးဆောင် မဟာဘွဲ့ တို့ကိုချီးမြှင့်
1/ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတို့၏လွတ်မြောက်ရေးအတွက်စစ်အာဏာရှင်ကိုကြံ့ကြံ့ခံတော်လှန်တိုက်ပွဲဝင်ရန်ဦးဆောင်နေသူရခိုင်တပ်မတော်စစ်ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကိုစ်ပညာသိပ္ပံဆိုင်ရာဂုဏ်ထူးဆောင်ပါရဂူဘွဲ့ကိုချီးမြှင့် ကာ ရခိုင်တပ်မတော် (Arakan Army -AA)ကိုအလေးပြု လိုက်ပါသည်။
2/ပုဒ်မ၅၀၅အထုတ်ခံအိမ်ချိတ်ပိတ်ခံစွန့်လွှတ်ကာ အင်အားကြီးမားသောစစ်ဓမြတပ် ကိုခုခံ တိုက်ပြီး၊ ပခုက္ကူပြည်သူတို့ကိုကာကွယ်နေသော ပခုက္ကူမြို့ပြ ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့၂ကို ဦးဆောင်နေသူဝေယံတာရာကိုဂုဏ်ထူး ဆောင်စစ်ပညာမဟာသိပ္ပံဘွဲ့ ကိုချီးမြှင့် ကာ Karenni ပခုက္ကူမြို့ပြ ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့၂ကိုကိုအလေးပြု လိုက်ပါသည်။